भारतले कालापानीमा हेलिकप्टरबाट पुर्यायो फेरी यस्तो ख’तरना’क मेसिन, स्थानीय त्र’सित, किन मौन छ ओली सरकार ? – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/भारतले कालापानीमा हेलिकप्टरबाट पुर्यायो फेरी यस्तो ख’तरना’क मेसिन, स्थानीय त्र’सित, किन मौन छ ओली सरकार ?
भारतले कालापानीमा हेलिकप्टरबाट पुर्यायो फेरी यस्तो ख’तरना’क मेसिन, स्थानीय त्र’सित, किन मौन छ ओली सरकार ?
दार्चुला – भारतले कालापानी क्षेत्रमा अ’त्याधुनिक र ठूलो आकारको ‘चिनूक’ हेलिकोप्टरमार्फत मेसिन र सामग्री ढुवानी गरिरहेको छ । नेपालमा सीमा अ’ति’क्रमणबारे चर्चा र आ’क्रो’श बढिरहेका बेला भारतले भने अ’तिक्र’मिण गरेको कालापानी क्षेत्रमा गतिविधि बढाएको छ ।
पिथौरागढ जिल्ला मुख्यालयमा रहेको नैनीसैनी हवाई मैदानदेखि अ’तिक्र’मित नेपाली भूमि गुञ्जीसम्म चिनूक हेलिकोप्टरमार्फत ठूल्ठूला मेसिन र सामग्री ढुवानी भइरहेका छन् । अ’तिक्रमित नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाले सडक निर्माण गरिरहेकोले ठूला मेसिन र निर्माण सामग्री हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी भइरहेका हुन् ।
आइफोन प्रयोगकर्ताका लागि दु:खद खबर ! एन्ड्रोइडको तुलनामा आइफोन १ सय ६७ गुणा असुरक्षित